IZINTO EZIHLEKISAYO ESIZENZAYO NGAPHANSI KOKUCINDEZELA KOKUHLOLWA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - INSYNC
Izinto Ezihlekisayo Esizenzayo Ngaphansi Kokucindezeleka Kokuhlolwa
Ezemidlalo U-Anirban Lahiri uyazethemba ngaphambi kweRBC Heritage
Ama-movie U-Shah Rukh Khan Uzivalela Ngokwakhe Ngemuva Kwamalungu E-Pathan Test Positive ye-COVID-19
Izindaba Ukushoda akuyona inkinga: UMnyango Wezempilo ugxeka amazwe athi 'awuyiphathi kahle' imigomo ye-COVID
Ubuchwepheshe Uhlu Lawo Onke Amavawusha Wokungena Kwedatha Kusuka ku-Reliance Jio, i-Airtel, i-Vi, ne-BSNL
Izimoto IKabira Mobility Hermes 75 Isivinini Esikhulu Sokulethwa Kokuhweba Esethulwe ENdiya
Ezezimali Ukuwa Kwentengo Yegolide Akukhathazi Kakhulu Ama-NBFC, Amabhange Adinga Ukuqapha
Ikhaya I-Insync Cindezela Pulse oi-Anwesha ngu U-Anwesha Barari | Kushicilelwe: NgoLwesibili, Mashi 5, 2013, 16:13 [IST]
Izivivinyo zebhodi seziqalile eNdiya futhi futhi kuyisiqalo sesikhathi eside sokucindezeleka kwabafundi. Okokuqala, abafundi bazocindezelwa ngezivivinyo uqobo bese kuthi ngemiphumela ezayo. ENdiya, sithatha izivivinyo zebhodi ngendlela ebaluleke kakhulu. Kodwa-ke, leso yisihloko sengxoxo esizokwenza ucindezeleke ngokwengeziwe. Ake sikhulume ngezinto ezihlekisayo esizenzayo ngaphansi kwengcindezi yezivivinyo esikhundleni salokho.
Indlela engcono kakhulu yokuqhuma kwengcindezi yezivivinyo ukukhuluma ngezinto ezibucayi esizenzayo ngaphambi nje kokuhlolwa. Nazi ezinye zezinto ezihlekisa kakhulu thina bafundi esizenzayo ngaphansi kwengcindezi yezivivinyo.
izithelo ezomile ngesikhathi sokuqala kokukhulelwa
Shiya ithikithi leHholo ngemuva
Abafundi abaningi benza leli phutha ngaphansi kwengcindezi. Bashiya into ebaluleke kakhulu njengetikiti lasehholo noma amapeni noma ikhadi le-ID ngemuva. Ngokujabulisayo banabazali okufanele babakhumbuze noma kungenjalo, bekungeke kube yinto ehlekisayo kepha iphutha elibuhlungu.
Doodle Ephepheni Lemibuzo
Sonke siyazi ukuthi asivunyelwe ukubhala noma yini ephepheni lemibuzo. Kepha bonke abafundi badweba imidwebo ephepheni lemibuzo ukuze banciphise ukucindezeleka kwezivivinyo. Ngosuku lwezivivinyo, bonke bangamaciko.
Ungaziphathi kahle igama lakho
Abafundi abaningi baphuthelwa kabi noma babize kabi amagama abo ngaphansi kwengcindezi. Izikhathi eziningi uzobabona bebhala igama elingalungile ephepheni lokuphendula noma basho amagama abo ngokujabulisayo lapho umgadi wabagibeli ebabiza.
Chitha amahora endlini yangasese, uyabuyekeza
kanjani ukususa izinwele esilevini
Abafundi abaningi bachitha amahora amaningi endlini yangasese ngaphambi kokuhlolwa kwabo. Abakwenzi lokhu ngoba baqunjelwe empeleni bayabuyekeza endlini yokugezela. Yindawo ehlekisayo nexolayo enuka kamnandi yokubukeza.
Uhambo Futhi Uwele Ehholo Lokuhlolwa
Cabanga ukukhubeka uwe phansi phansi phambi kwekilasi eligcwele abantu abaklolodela nabo! Kungokuhlangenwe nakho okuyihlazo kakhulu kunoma yimuphi umfundi osemncane. Futhi lokhu kwenzeka ngoba bebenengcindezi mayelana nokuhlolwa bakhohlwa ukubopha izintambo zezicathulo zabo.
amanoveli amahle kakhulu ezothando afundwa ngababhali baseNdiya
Shayela Umgqugquzeli Ngegama Elihlekisayo
Into eyodwa eyihlazo engiyenzile ukubiza umgqugquzeli ngithi 'Mama, ngidinga iphepha'. Kepha ukucindezela kokuhlolwa kungakwenza lokho kuwe. Lapho ingqondo yakho ididekile, awazi ukuthi ukuphi nokuthi ukhuluma nobani.
Ukubizwa Kwezenkolo Kungazelelwe
Iningi labafundi likholwa ngokwedlulele ngaphambi kwezivivinyo. Unyaka wonke bazoba matasa kakhulu ngomculo wabo we-rock, Facebook / Twitter kanye nabangane. Kepha ngaphambi kokuhlolwa kwebhodi, banobizo lwabo lwenkolo.
Lezi ngezinye zezinto ezihlekisayo esizenzayo uma sicindezelekile ngenxa yezivivinyo. Yabelana nathi ngezindaba zakho zokucindezela ukuhlolwa.
ukunciphisa kanjani izinkalo namathanga ekhaya
indlela yokulungiselela hara bhara kabab
ukudla okungadliwa kakhulu ehlobo
yisinkwa esinsundu esilungele ukwehlisa isisindo
unganciphisa kanjani izinqa namathanga ngaphandle kokuzivocavoca
mangaki amagilebhisi omile ngosuku